“ကျစ်လစ်သိပ်သည်းရောင်းချရန် utility ကိုလယ်ထွန်စက် -သေးငယ်တဲ့ဆရာယောဟနျသမင်ရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုလယ်ယာထွန်စက်များ” – Tractor Loader
Posted on September 27, 2018 by Kimberley Jarvis
“ကျစ်လစ်သိပ်သည်းရောင်းချရန် utility ကိုလယ်ထွန်စက် -သေးငယ်တဲ့ဆရာယောဟနျသမင်ရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုလယ်ယာထွန်စက်များ”
ပိုက်-တင်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်ရန်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးနှင့်အချိန်-စားသုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါစည်ပင်သာယာကွန်ယက်ကိုပိုက်လိုင်းများအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ဘဲကြောက်စရာကောင်းပါစေဦးတော့ K မင်းသားလို ကမြန်မာပရိသတ်တွေသိတဲ့ လီဟာ Scarlet Heart ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ စာနာစိတ်မရှိသောမင်းသားRyeo အဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ ့ရန်သူတွေကပါကြောက်ရသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသလို Scholar Who Walks the Night ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလဲVAMPIRE အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခြေး 1 တစ်တန် – briquettes ၏အကြောင်းကို 0.5 တန်ချိန် 1 ကီလိုဂရမ် 3.2 ကီလိုဝပ်နာရီ၏အမိန့်များ၏ကယ်လိုရီတန်ဖိုးဆိုလို ခြေး၏တစ်တန်ကို 1600 ကီလိုဝပ်နာရီပေးသည်။ (အစား biogas ထံမှအဖြစ် 65 ကီလိုဝပ်နာရီထက်) အပူ။ ဆိုလိုသည်မှာ, 25 ဆပိုစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး, အဖြစ်အများကြီးလျော့နည်းကုန်ကျသည်။
သောက်ရေသန့်များ ပေးအပ်လှူဒါန်းရာတွင် လာမည့်မိုးရာသီမတိုင်ခင်ကာလအထိ ရေလှောင်စည်ကြီးများ၊ ရေသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် ကားကြီး များ နှှင့် ရေသန့်ဗူးများဖြင့် လှူဒါန်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ဒေသမှပြည်သူများ၏ အနာဂတ် အတွက် ပိုမိုအကျိုးပြု ထောက်ပံ့နိုင်မည့် MPT ၏ “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုးအစီအစဉ်” အရ ရေတွင်းရေကန်များ တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
KAMAZ ထရပ်ကား,9မီတာ၏ဘေးထွက်တစ်အရှည်ရှိခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, အဆောက်အဦးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ရှည်လျားနည်းကားများသာမဆောင်ရွက်နိုင်သည့် Non-စံအတိုင်းအတာနှင့်အတူအခြားကုန်စည်။
ကိုတင်သော၏ပွင့်လင်းနည်းလမ်းရပ်ကွက်, အသစ် built-တက်ဒေသများအတွင်း၌, unimproved လမ်းများနှင့်ရင်ပြင်ပေါ်အဖြစ်လမ်းများနှင့်ရင်ပြင်၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်နေတာ၏အခြားသောလမ်းဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌ဆုံးဖြတ်ထားရပါမည်။
လမ်းအောက်ထိုးဖေါက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ? စျေးနှုန်းအဆင့်ကိုအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ရေဒါစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု. စီမံခန့်ခွဲထိုးဖေါက်ခြင်းစီမံခြင်းမပြုရသေးသောထက်ပိုမိုစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအတိုပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်လျှင်, အလုပ်သမားရိုးကျတူးဖော်စက်အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏လမ်းကြောင်းခြေရာခံတဲ့စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားမထားဘူးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ယန္တရား elongated အပေါက်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ရေဒါကိရိယာမြားအားဖွငျ့စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ ရုရှားကုမ္ပဏီများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လမျးခရီးအောက်မှာတင်သောဆက်သွယ်ရေးဖွင့်ဖို့လျော့နည်းစျေးကြီးနည်းလမ်းများဖြစ်သည့်, မီတာလျှင် 1000 ရူဘယ်ထဲကနေစျေးကြီးစျေးနှုန်းများအောက်ပေါက်ကိုဖန်တီးရန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
ရှုပ်ထွေးသောဝန်ဆောင်မှု။ ဝှက်ထားသောမူအရအပေါ်ထားကြ၏အပူဆက်သွယ်ရေးနီးပါးပုံမှန်အားဖြင့်ပြုပြင်ကြရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာဒေသများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အလှဆင်ခြင်းနှင့်အကာအကွယ်အဆောက်အဦများဖျက်သိမ်းဖို့လိုအပ်အဖြစ်မဆိုဝန်ဆောင်မှုပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျသည်။
အမြောက်အများအတွက်စိုက်ပျိုးရေးတာယာရယူဘို့နှင့်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်နှုန်းထားများမှာအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ! အဆိုပါကုမ္ပဏီတာရှည်ခံစိုက်ပျိုးရေးတာယာ၏ကျယ်ပြန့များ၏ထင်ရှားတဲ့ထုတ်လုပ်သူ, Export & ပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခင်းကျင်းစိုက်ပျိုးရေးထွန်စက်တပ်တာယာ, စိုက်ပျိုးရေးထွန်စက်နောက်တာယာ, စိုက်ပျိုးရေးထွန်စက်နောက်တွဲယာဥ်တာယာ, စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းတာယာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြားသူများ၏အားလုံးပါဝင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးတာယာများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သာက high-grade ကိုကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုခြင်းပါစေ။ ခုခံဝတ်ဆင်သူတို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ finish ကိုမှမရှိစေရန်, နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်ခုခံနှင့်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ, ဤတာယာလိုအပ်ချက်အတွက်ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။
ရေကန်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို မြေသယ်ကား(၂၆)စီး၊ မြေတူးယန္တယားယာဉ်(၁၃)စီး တူးဖော်ဆောင် ရွက်နေသည်မှာ ကန်အတွင်းရှိ မြေ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကို တူးဖော်သယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီ အနေဖြင့် မြိတ်ပြည်သူလူထုလှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း(၃၀ဝ၀)ကျော် ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကန်တူးဖော်ရာတွင် ပထမအဆင့် မူလရေကန်အနက်မှ(၉)ပေအနက်ထပ်မံတူးဖော်လျက်ရှိရာ ရေကန်အောက်ခြေမှအနက်စုစုပေါင်း (၁၈)ပေရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကန်သည် ယခင်ကထက် ရေပိုမိုဝင်ဆံ့လာနိုင်ကြောင်း ရေကန်ဘောင် အဆင့် မြှင့်တင် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးမြတ်ကိုကို က ပြောသည်။ ရေကန်တူးဖော်ရာတွင် ရေကန် ဘောင်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ပြည်သူများဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းများ အောင်အောင်မြင် မြင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဂျီလင်ယာတိုင် အုပ်စုသည် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသော လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင်သာမက ဘဏ္ဍာရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များလည်း လုပ်ကိုင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က တရုတ် နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး လုပ်ငန်း ၅၀၀ တွင် အဆင့် ၃၂၉ ရှိသည် ဟု ၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဆိုသည်။
မေကြး၊ ေမ ၃၁ ။ ။ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရနံ လက္ယက္ တြင္းတိမ္ လုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ားမွ ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္း ခဲ့ေသာ ရန္ပံုေငြ မ်ားထဲမွ က်ပ္သန္း (၂၀၀) အား ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၏ ကိုယ္စားလွယ္က ေမလ ၃၀ရက္ ေန႔လည္က လက္ရွိ မေကြးတိုင္း…
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးတွင်းများမှ စိတ်ပျက်စရာ ရလဒ်များသည် Woodside အတွက် ထိခိုက်မှု ကြီးကြီးမားမား မရှိလှကြောင်း ပြောဆိုပြီး ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကုန်မှ ချမှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ပီတာ ကိုးလ်မင်း က ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြောသည်။
ရှုထောင့်ကအောက်ပါကုန်တင်ကားရှိသည်: 10,35-13,6 မီတာ – အရှည်, 2.45-2.50 မီတာ – အကျယ်, ပုတီးအမြင့် – 70-80 စင်တီမီတာ။ ပိုက်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ပြွန်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပမာဏတိုးမြှင့်ဖို့ conic တင်လိုက်တယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်, ဘီလာရုနှင့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အများအားဖြင့်အမြည်းလုပ်ကားတစ်စီး onboard ။ အဲဒီမှာ 8-12 မီတာကားများကျွန်တော်တို့ကိုရုရှားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီကြောင်းမှတ်မိကြကုန်အံ့, ရှည်လျားများမှာ – ကိုယ်ခန္ဓာ၏ 2,45 မီတာအကျယ်, ဒါပေမယ့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကားများမကြာသေးမီကယူရိုစံချိန်စံညွှန်းများကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Facebook News Feed မွာ ေပၚလာတတ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ Share လုပ္ထားတယ္ဆိုတဲ႔ Porn Video (pornographic video clip) Auto ပတ္သတ္ၿပီး Click ႏွိပ္မိၿပီဆိုတာနဲ႔ (Fake) Flash player Install ခုိင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္…
trenchless များအတွက် တံခါးပိတ် gasket 63-400 မီလီမီတာအချင်းပြွန်ကျယ်ပြန့် gruntoprokalyvateli စက်မှုနှင့် pneumatic စို့ ol-60 အမျိုးအစား (SB-144), SP-4605, SP-4603, PR စနစ်-400 (CO-134) နှင့် M-130 အသုံးပြုကြသည်။ သုံးပြီး Pnevmoprohodka pnevmoproboynikov အမျိုးအစား “မှဲ့” မှတဆင့် device ကိုမှလျှောက်ထားခြင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောအလျားလိုက်နှင့် 63-400 မီလီမီတာနှင့် 40-50 မီတာအရှည်၏အလုံပိတ်နံရံများအချင်းနှင့်အတူရေတွင်းသွေဖည်, ပိုက်လိုင်းရာမှတဆင့်ကပြောပါတယ်။ Pnevmoproboynik တစ် Self-propelled pneumatic ဒေသန္တရစက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ရေတွင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီး, action ကိုအောအိမ်ယာအတွက်ဒရမ်သမားအရပ်ကတိပြု ချုံ့လေကြောင်းရန် reciprocating နှင့်အိုးအိမ်၏ရှေ့ဆုံးတွင်သပိတ်, မြေထဲသို့သွင်းယူ။ အိမ်ရာများ၏ပြောင်းပြန်လှုပ်ရှားမှုမြေပြင်ပေါ်တွင်ပွတ်တိုက်အားအင်အားသုံးကြောင့်တားဆီး။ မြေဆီလွှာတွင်ရွေ့လျားကာကြိုတင်ဦးတည်ချက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားအခါ axial symmetry နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရှည် (1.4-1.7 မီတာ) pnevmoproboynik ကြောင့်။
ကောင်းသောဖရဲသီးအဘယ်ကြောင့်ငါယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးသွင်းခြင်းမှဖရဲသီးအစေ့များကိုမဝယ်သင့်တယ်, မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မြေဆီအလုံအလောက်အလင်းမပါရှိလျှင်ကြောင့်နက်ရှိုင်းစွာကလျှော့ပေးရေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။
“အခုေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ေရမေဆးေက်ာက္သမားေတြ ျပန္အလုပ္ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ကုမၸဏီလည္း ျပန္ၿပီး လုပ္ငန္းစေနၿပီ” ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ႐ံုးဝန္ထမ္း တစ္ဦးက Facebook မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။ ၂၄-၁-၂၀၁၂ ရက္ သတင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕အနီးရွိ ပန္မားဆြတ္ႀကိဳင္ ေမွာ္အသစ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ကာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “အရင္တုန္းကဆိုရင္ ကာရာအိုေက ဆိုင္ေတြကေန ဆူညံေနတဲ့ သီခ်င္းသံေတြနဲ႔ အသက္ဝင္ေနတဲ့ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ႀကီးက တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး အသက္မဲ့ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေရမေဆး ေက်ာက္သမားေတြကလည္း လုပ္ငန္းအဆင္မေျပလို႔ ေအာက္ဘက္ကို ႀကံဳရာနဲ႔ ႀကံဳသလို ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီ” ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ ေကာက္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေသာ ေျမႀကီးအပံုမ်ားမွ ေက်ာက္သားေက်ာက္စမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကသည္ဟု သိရကာ ယင္းၿမိဳ႕မွာပင္ ေရမေဆးေက်ာက္ ေကာက္သူႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္သည့္ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မြန်မာအနေဖြင့် အဆိုပါအခြေအနေမှ ပိုမိုတိုးတက်လာရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိရန် ကြိုးပမ်းရသည့် Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။22 ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံ EITI အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင် အရေးကြီးသည့် နေရာမှပါဝင်လျက်ရှိသော တပ်မတော်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် (UMEHL) နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) )တို့ကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် အကြံပြုချက်များပေးခဲ့သည်။23
ပြုပြင်ပတ်ဝန်းကျင်၏သဘာဝစောင်ရေတိုက်ရိုက်မိစ္ဆာမျက်နှာကျက်သို့မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းပြွန်အားမရပါဝငျသညျ။ တောင်စောင်း risers အလှဆင်သေတ္တာများဖြင့်ကာကွယ်ထားသို့မဟုတ်နံရံ၌ထားရသည်။ အောက်ခြေလိုင်းထရံကိုသို့သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္ / ေဖသက္ ထက္ခင္ / ဧရာဝတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔က စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရန္…
Ripened နှင့် undamaged အသီး squash နှင့်ဖရဲသီး feed ကိုခြောက်သွေ့တဲ့အခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့် C ဆောင်းတွင်းတစ်လျှောက်လုံးနီးပါးဖြစ်ပါတယ် 2-5 °၏အပူချိန်မှာနွေးနိုင်ပါသည်။ ရှည်လျားသောများအတွက်သိမ်းဆည်းထားဗဟိုအာရှနှင့် Transcaucasian ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူစားပွဲတင်ဖရဲသီးနှင့်ဖရုံ။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး People’s Oil Industry ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ တွင် Burma Oil Corporation အဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ တွင် မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) ဟု ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့သည်။
(အိပ်ယာအကြောင်းအရာတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ) အခါအစိုင်အခဲချေးဆွေး, အရည်ချေးသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲချေးအစိတ်အပိုင်း (bespodstilochnom အကြောင်းအရာတိရစ္ဆာန်များမှာ) အရည်ကွဲကွာ။ ဆွေးခုနှစ်, ခြေးအမျိုးမျိုးသောသည်အမျိုးအစားသစ်ဆွေးသို့မဟုတ်ကုန်တယ်ကောက်ရိုးအတွက်ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, ရှိသမျှမြေတူးစက်ကြီးများဖြင့်အထူးက်ဘ်ဆိုက်များမှာနှိုးဆော်နှင့်လိပ်ခေါင်းအတွက်တင်လိုက်တယ်။ humus ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း composting ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ချေး helminth ကြက်ဥနှင့်ပေါင်းပင်မျိုးစေ့များပျက်စီးခြင်းမှပခုံးအပူချိန်ဆောင်တိုးမြှင့်။ ကြောင်းဆွေးပြီးနောက်အပင်များအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Vibroimpact တပ်ဆင်ခ hCG-51(ပုံ။ 21.5, B) မှ 530 အထိအချင်းနှင့်အတူ, အချင်း 530-1020 မီလီမီတာ၏ပိုက် (Case) တွန်းနိုင်ပါတယ် မီလီမီတာမြေပြင်ကနေကယ်ဆယ်ရေး – ရေတွင်းမြေကယ်ဆယ်ရေးနှင့် 1020 မီလီမီတာအထိတစ်ဦးချင်းမရှိဘဲ။ ဒီ setting ကိုအတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဒီကဗျာသောအဘို့ကို 2.5 မီတာနှင့်ပါဝါ 75 kW မော်တာမှာ 6.3 အစုလိုက်အပြုံလိုက် sheathe 50 မီတာဖို့ပိုက်အရှည်ကိုတက်များပေါ်တွင် install နိုင်ပါသည်။
ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်အရ တောင်သူများ အနေဖြင့် မိမိ ဝယ်ယူလိုသည့် လယ်ထွန်စက် ကျသင့်ငွေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို စက်မှု လယ်ယာ ဦးစီးဌာနသို့ စတင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိငွေများကို ၃ နှစ်အတွင်း ၆ ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးဆပ်နိုင်ပါက စက်ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားကို ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးလှိုင်က မနေ့က ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
One Reply to ““ကျစ်လစ်သိပ်သည်းရောင်းချရန် utility ကိုလယ်ထွန်စက် -သေးငယ်တဲ့ဆရာယောဟနျသမင်ရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုလယ်ယာထွန်စက်များ””
Previous PostPrevious “Farm 트랙터 경매 -중고 겸용 트랙터을 (를) 검색 할 수 있습니다. 사용 된 중고 트랙터”
Next PostNext “구매 장바구니 John Deere +존 디어 트랙터 신모델”